Indwangu Emhlophe Embathwa Yingane Uma Izalwa – The Ulwazi Programme
Indwangu emhloshana embathwa yingane uma izalwa eyaziwa ngokuthi yiveyili ibalulekile kakhulu kubantu abazalwa beyembethe. Isho inhlanhla enkulu futhi kubalulekile ukuthi umndeni uyibeke kahle ngoba uma iwela ezandleni ezingalungile abantu bangayisebenzisela izinto zabo ezingalunganga.
Kuthiwa okokuqala ukuthi uma isizaliwe kuhleshulwa ucezu oluncane lushiswe nempepho ukubika ingane ekhaya. Kubalulekile ukuthi kube abazali bayo ingane uma beshadile abayibikayo kodwa uma bengashadanga kufanele kube umuntu omdala emndenini owenza lokhu. Okunye okwenziwayo ngalengubo yomntwana uma kwenzeka umntwana egula kuyahleshulwa kuyona ashiselwe impepho kukhulunywe nabaphansi ngokugula kwengane bayicelele ukuthi isheshe ilulame. Kunenkolelo yokuthi ingane ezalwa igqokile iba nenhlanhla engandele noma ubani futhi iyisibusiso esivela kwabaphansi. Noma isikhulile kuthiwa kumele yenzelwe umsebenzi othize ukuyicelela izinhlanhla nokuvikeleka emadlozini.
Kuyenzeka lengubo noma lendwangu intshontshwe ngabantu abakwaziyo ukubaluleka kwayo. Ngoba phela inhlanhla eyamaniswa nayo ingasebenzela noma ngabe ubani oyitholile lendwangu. Kuthiwa uma ilahlekile ingane leyo ikhula ngokugula noma izinto zingayihambeli kahle empilweni. Kulesisimo umuntu okholelwa noma owatshelwa ukuthi wazalwa egqokile kodwa yalahleka ingubo leyo uyakwazi ukuthola ukusizakala kubelaphi bendabuko. Bayambonisa ukuthi kufanele enzelwe umsebenzi kucelwe kwabaphansi ukuthi abambheke bamuphe nezinhlanhla. Lomsebenzi wenziwa ngokuthi kuhlatshwe imbuzi emhlophe engenabala uthengelwe nezingubo zokugqoka ezintsha. Lowo obekelwe umsebenzi wokukhuluma namadlozi ekhaya uyayibika ingane leyo atshele amadlozi ukuthi bayizala kabusha bayicelele izinhlanhla ngoba ingubo yayo yantshontshwa.
Written by: Nqobile Mdabe